Bheka ukuthi i-iPhone yakho imahhala yini
Uma ufuna yazi uma i-iPhone yakho ivuliwe, lapha sikunikeza insizakalo yokuyihlola ngesiqinisekiso esigcwele. Thola ukuthi ngabe I-iPhone imahhala noma hhayi ngendlela ephephe kunazo zonke.
Ukwazi isimo sokuxhumeka kwe-iPhone yethu noma i-iPhone esifuna ukuyithola kubalulekile ukuze siguqule inkampani yocingo ngokuzayo ngenhloso yokonga izikweletu zethu, noma nje ukuguquguquka kokungaxhunyaniswa unomphela nenkampani. Lapho i-iPhone yamukela amakhadi kunoma yiluphi uhlobo lwenkampani, yaziwa njenge-iPhone "yamahhala", okungukuthi, singawasebenzisa ama-SIM khadi kunoma iyiphi i-opharetha ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lomkhawulo futhi ngendlela elula kakhulu.
Ungazi kanjani ukuthi i-iPhone imahhala
Ngakho-ke, uma sizothola insiza ye-iPhone esetshenzisiwe, kungenxa yokuthi umthengi wesikhathi esizayo uyazi ukuthi i-iPhone imahhala noma ixhunywe nenkampani yezingcingo, ngoba kungenjalo, ngeke bakwazi ukuyisebenzisa ngenye indlela. i-opharetha yekhadi kuleyo exhunywe ku-iPhone. Ngakho-ke, isinyathelo esibalulekile ngaphambi kokuthenga i-iPhone, ukuqinisekisa ukuthi imahhala futhi singayisebenzisa nenkampani yocingo esiyifunayo. Ukuze wazi ukuthi ngabe i-iPhone yakho ivuliwe, sikunikeza isevisi elula futhi esheshayo, kuzofanele ufake imininingwane eshiwo kwifomu, uzothola i-imeyili enombiko wedatha eceliwe kungakapheli imizuzu eyishumi nanhlanu (kwezinye izimo ezithile kungabambezeleka kuze kufike emahoreni angu-6).